Xildhibaanada Baarlamaanka dalka oo Sameeyey Guddi dabagala dhaqaalaha abaaraha | SAHAN ONLINE
Xildhibaanada Baarlamaanka dalka oo Sameeyey Guddi dabagala dhaqaalaha abaaraha
MUQDISHO – Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta meel mariyey qarraar ku aadan Gurmadka abaaraha ee dalka kaasoo muddooyinkan ay ka doodayeen Xildhibaanadu.
Xildhibaanada ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo gurmadka abaaraha iyo in la sigh qaabka gurmadka loo sameynayo iyadoo guddiyada ku shaqada leh ay Baarlamaanka la wadaagayaan xogta halka ay shaqadu marayso.
Guddoomiye kuxigeenka 2aad ee Baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa soo jeediyey in Xildhibaan kasta degaankiisa laga talageliyo ee xaaladda abaartu saameysay maadaama isagu matalayo.
Xildhibaanada ayaa matala shacabka ,dadka baaba’ayana waa dadkii ay iyagu matalayeen ,waxaan ka codsanay Madaxweynaha iyo Raiisalwasaarahaba in hawl kasta oo la qabanayo in xildhibaan degaan doorashadaas lagu wargeliyo haddii la tagayana “ayuu yiri
Guddoomiyaha gollaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo shir guddoominayey kulanka ayaa ugu dambeyn ka codsaday mudanayaasha Baarlamaanka iney u codeeyaan in la sameeyo guddi kor joogto ka noqda deeqaha la gaarsiinayo dadka shacabka ah.
Xildhibaanada Gollaha shacabka ayaa ugu dambeyn cod gacan taag ah ku ansixiyey in la sameeyo guddigaas kor joogtada ah.
Waddooyin muhiim ah oo dib loo furay gudaha magaalada Muqdisho[Sawirro]
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo ka qeybgalay Shirka Wasiirada Arrimaha dibadda[Sawirro]
Guddoomiye Eng. Yariisow oo la kulmay Ergeyga gaarka ah ee dalka Talyaaniga u qaabilsan Afrika[Sawirro]